Taom-pianarana 2018-2019: iray volana ihany ny ampahany voalohan’ny fampianarana | NewsMada
Taom-pianarana 2018-2019: iray volana ihany ny ampahany voalohan’ny fampianarana
Niditra an-dakilasy, omaly, ny ambaratonga rehetra ho an’ny sekolim-panjakana manerana ny Nosy ary nosantarina ny taom-pianarana vaovao 2018-2019 hanohizana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE). Efa nandray ny asany kosa ny mpampianatra, herinandro mialoha.
Ho an’ny EPP Antanandrano (Cisco Avaradrano), herinandro handaminana ny fandraisana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny izao. Nisy ny fifankahalalana amin’ny ray aman-dreny sy ny mpianatra niaraka amin’ny mpanabe hanalana ny tahotra ho an’ireo vao sambany handia sekoly, hoy ny talen-tsekoly, Rajoarihery William Victor, omaly. 30 000 Ar ny latsakemboka aloan’ny ray aman-dreny mandritra ny taona ka 3% sisa tsy nahavita izany, amin’izao fotoana izao. Efa hatry ny ela no nanomanana ny ray aman-dreny hanefa ny vola mialoha ny datin’ny fidirana.
Nanangona ny fitaovam-pianarana avy amin’ny mpianatra eny amin’ny péscolaire ny mpanabe. Herinandro torolalana ny fanombohana hametrahana ny lamina samihafa ary nizahana ireo mpianatra tsy salama sy mbola manana olana. Amin’ny ankapobeny, mazoto mampiana-janaka ny ray aman-dreny, na eo aza ny fahasahiranana amin’ny fiainana andavanandro. Hifarana ny zoma 21 desambra ny iray volana voalohany ho an’ny taom-pianarana. Hiverina an-dakilasy indray ny mpianatra, ny alatsinainy 7 janoary ary tsy hitsahatra izany raha tsy ny zoma 1 marsa. Andro hampiatona ny fampianarana ny 27 febroary ka hatramin’ny 1 marsa noho ny andron’ny sekoly.